Dad Loo Soo Qabtay Nabadoon Xalay Lagu Dilay Baladweyne – Goobjoog News
Maamulka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgallo ay ciidamada amniga xalay illaa saakay ka wadeen magaaladaasi, kaasi oo lagu raadinayey dadka ka dambeeyay nabadoon xalay lagu dilay magaaladaasi.
Guddoomiyaha Baladweyne Maxamed Cismaan Cabdi oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in howlgalladan ay dad kusoo qabteen, islamarkaana dadkaasi baaritaan lagu wado.
Ma aanu sheegin tirada dadka ay soo qabteen hase ahaatee wuxuu sheegay in dadka lasoo qabtay ay ka dhawaayeen halka dilka uu ka dhacay, lana ogaanayo suurta galnimada wax ka ogaanshiyaha dilkaasi iyo inay iyagu ka dambeeyaan intaba.
Dhinaca kale waxaa magaalada Baladweyne lagu arkayaa maanta ciidamo badan oo sugaya amniga guud ee magaaladaasi.
Rag ku hubeysan Bistoolado ayaa habeenkii xalay ahaa waxay magaaladaasi ku dileen Nabadoon Cabdi Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka ugu caansan gobolkaa Hiiraan.
Zzxgbm mouddv Cialis buy cialis coupon cvs
Aoraum frnhxv Buy pfizer viagra cialis coupon
Dspwpb wescex Viagra medication where to buy cialis online
chewable cialis 36 hour cialis online gneric cialis...
what does female viagra do genaric viagra viagra heart attac...
cialis vs viagra is viagra bad for you viagra commercial asi...
generic cialis online pharmacy https://cialis360.jueriy.com/...
cheapest cialis on the web online doctor cialis brand cialis...